Dawlada KMG oo baaq ka soo saartey colaada ka aloosan qaybo ka mid ah gobolka Mudug – SBC
Dawlada KMG oo baaq ka soo saartey colaada ka aloosan qaybo ka mid ah gobolka Mudug
Warsaxaafadeed ka soo baxay dawlada KMG ayaa looga hadley colaadii deegaano ka mid ah gobolka Mudug ku dhexmarey beelo walaalo ah oo deegaankaasi ku diriray. warsaxaafadeedka oo SBC la soo gaarsiiyey ayaa u qornaa sidan.
Muqdisho July 5, 2011——-Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya waxay baaq nabadeed u diraysaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya Gobolada Mudug iyo Galgaduud kuwaasoo dhaliyay dhimasho aad u badan iyo dhaawac.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah Mudane Dr. C/weli Maxamed Cali ayaa sheegay in uu aad uga xunayahay colaadaha soo noqnoqoday ee ka taagan gobolada Mudug iyo Galgaduud. Horumarka Goboladaasi waxay ku xiran yihiin xoojinta nabada. Dadka deegaankuna waa dad walaalo ah ehelna ah, wiilkii ku dhintaana waa kugu dhimay oo kaadhimay.
“Ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa dhamaan ehelada dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi, waxaana marka labaad leeyahay dagaalka ha la joojiyo maadaama uusan labada dhinacba wax faa’iido ah u laheyn” ayuu yiri R.wasaaraha oo ka hadlayay dagaalka, wuxuuna dhinaca kale wax laga xumaado ku tilmaamay in xilligan oo ay jiraan abaaro dad iyo duunyaba aafeeyey ay dagaalamaan Soomaalida dhexdeeda.
“Waxaan la hadlay madaxda maamulada goboladaasi, xildhibaanada ka soo jeeda gobolada iyo dhamaan qeybaha bulshada, waxayna naga balan qaadeen in ay dhexda u xiran doonaan sida loo joojin lahaa dhiigaasi daadanaya, waxaana rajeyneynaa inay mas’uuliyadaasi ka soo baxaan” ayuu yiri Dr. C/weli Maxamed Cali.
Ugu danbeyntii Ra’iisul Wasaaraha wuxuu sheegay inay dhowaan gaari doonaan goobaha lagu dagaalamay guddi Nabad raadis ah oo ay Xukuumadu u xil saartay daminta colaadaasi oo ka kooban Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad iyo odayaal dhaqameed.